विवादमा रहेको फिल्म ‘मणिकर्णिका’ लाई लिएर अभिनेत्री कंगनाको घर घेराउ !!-Nepali online news portal
विवादमा रहेको फिल्म ‘मणिकर्णिका’ लाई लिएर अभिनेत्री कंगनाको घर घेराउ !!
एजेन्सी, मुम्बई-बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावत अभिनीत चलचित्र ‘मणिकर्णिका’ विवादमा तानिएको छ । भारतको राष्ट्रिय राजपूत करणी सेना (एसआरकेएस) नामक संगठनले चलचित्रमा राखिएका दृश्यप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रदर्शन गरिरहेको छ । करणी सेनाले मणिकर्णिकाकी मुख्य पात्र अभिनेत्री कंगनाको घरसमेत घेराउ गरेको छ । केही समयअघि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘पद्मावत’ को समेत सेनाले व्यापक विरोध गरेको थियो ।
मणिकर्णिकामा कंगनाले रानी लक्ष्मीबाईको भूमिकामा देखिएकी छन् । करणी सेनाले भने अभिनेत्री कंगनाले माफी माग्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । करणी सेनाका सदस्यले कंगना घर बाहिर धर्ना दिनका लागि प्रहरीसँग अनुमति मागेको थियो । प्रहरीले उक्त कदमलाई अनुमति नदिए पनि जबरजस्ती धर्ना दिएपछि केहीलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ ।